Photocall TV: ahoana no ahitanao fantsona maherin'ny 1.000 maimaim-poana amin'ny tsindry iray monja | Androidsis
TV Photocall: ny fomba hijerena fantsona maherin'ny 1.000 maimaim-poana miaraka amin'ny tsindry kely mihoatra ny iray
Ny fanjifana streaming dia nitombo tato anatin'ny taona vitsivitsy. Betsaka ny tolotra misy amin'izao fotoana izao hijerena ireo karazana atiny rehetra, na andian-dahatsoratra na horonantsary fanadihadiana, horonan-tsary sy sarimihetsika izay mahaliana olona an-tapitrisany maro.
Iray amin'ireo sehatra izay Nahazo mpanaraka tato anatin'ny volana vitsivitsy ny Photocall TV, vahaolana tonga lafatra raha te hijery fantsona misy fotsiny ianao amin'ny fikitihana azy io. Ho fanampin'izay, manana fidirana amin'ireo onjam-peo malaza any Espana, any ivelany ary ny sasany tsy fantatra ny pejy.
1 Inona ny Photocall.tv
2 Ahoana ny fiasan'ny Photocall.tv
3 Fantsona misy
4 Mety amin'ny karazana fitaovana rehetra
5 Kalitaon'ny fahitalavitra Photocall
6 Solony hafa amin'ny fahitalavitra PhotoCall
7 Pluto TV, safidy mahaliana hafa
8 Kodi, ivon-haino aman-jery misy safidy isan-karazany
Inona ny Photocall.tv
Izy io dia pejy web natokana ho an'ny famoahana fantsona avy any Espana, Eropa ary ny kaontinanta amerikana, manamora ny fahitan'ireo mpampiasa azy mivantana ny fantsona amin'ny fipihana ny sarin'ny fantsona. Raha vantany vao tsindrio ny iray amin'ireo fantsona dia hasehony anao ny rohy mivantana handeha amin'ny fampielezam-peo.
Izy io dia heverina ho iray amin'ireo fahitalavitra manangona tsara indrindra amin'ny sokajy samihafa, hatramin'ny International misy karazany maro, manome fantsona hatramin'ny 1.000. Ny Photocall.tv dia havaozina matetika, na amin'ny fampidirana fantsona amin'ny lisitra lava, fa amin'ny fanitsiana ireo lesoka izay lazain'ny mpampiasa matetika.
Ny iray amin'ireo kilema kely azo omena azy dia ny tsy baikon'ny sokajy, na eo aza izany, ny tsirairay dia mampiseho ny anarana ahafantarana azy. Ny takelaka dia Nasionaly, Iraisam-pirenena, Hafa (fantsona miovaova), Radio (ao anatin'izany ny gara nasionaly sy iraisam-pirenena maro), Torolàlana, Fampahalalana ary VPN. Ny safidy Mazava dia hanova ny tonony mainty ho fotsy sy kinova fantatra amin'ny hoe jiro.
Ahoana ny fiasan'ny Photocall.tv
Tsotra ihany ny fiasan'ny fahitalavitra PhotocallRaha vantany vao tsindrio ny sarin'ny fahitalavitra dia hampiseho rohy maromaro, farafaharatsiny iray na maromaro mihitsy aza. Ny voalohany amin'izy ireo dia matetika no mivantana amin'ny fampielezam-peo, ny ambiny dia mazàna mampahalala, na ny mpitari-dalana na ny mety hahitana karazana atiny hafa ao anaty tranonkala.
Raha vantany vao manokatra ny fantsona mivantana ianao dia hitondra anao mankany amin'ny pejy Photocall TV miaraka amin'ireo safidy isan-karazany amin'ny mpilalao video. Raha ohatra ka manokatra «La 1» ohatra ianao dia manana ny kalitao ery ambany ny emission, ny volume, ny safidy hampihenana ary ny iray hampitombo ny efijery.
Ny sasany amin'ireo tambajotram-pahitalavitra maro dia manana safidy hijerena sarimihetsika, fisaorana rehetra mankany amin'ny atiny atolotry ny tsirairay amin'izy ireo. Ho tonga mora ampiasaina izany raha sanatria ka hampita ireo olana izay tsy mahaliana antsika mihitsy isika, dia matetika izany no mitranga amin'ny tranga maro.
Photocall TV dia manampy lisitra fantsona lehibe azon'ny mpampiasa mampiasa ny sehatra, izay olona an'arivony maro ankehitriny. Amin'izy ireo dia tsy misy ny tsy fahampian'ny fantsona mahaleo tena any Espana, anisan'izany i Canal Sur, TV3, TV Galicia miavaka, ary koa ireo firenena hafa, ao anatin'izany ny Antena 3, Telecinco, TVE-1, La Sexta ary maro hafa.
Ao amin'ny lisitra misy ihany koa ny sasany mahita andian-tantara toa an'i Factoria de Fición sy A3 Series, fanatanjahantena, izay tsy misy tsy fahampian'ny Gol Televisión, TV Real Madrid, TV Barca, TV Las Palmas, TV Betis ary Sevilla FC TV. Ankoatr'izay, eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia lavitra be ny karazany., satria misy ny sasany manana anarana lehibe toa an'i CNN, Fox, BBC, Euro News, ary koa fantsona 150 mahery.
Efa ao amin'ny «Hafa» misy fantsona maro karazanaNa fanatanjahan-tena izy ireo na lohahevitra hafa, ilaina ny manonona lohahevitra manandanja sasany toy ny AMC, Syfy, Vevo (fantsona mozika), Red Bull TV, NFL, Moto GP ary fahitalavitra zato mahery. Ny sasany mazàna dia manana safidy hijerena ny atiny ao amin'ilay pejy ihany, fa ny sasany kosa mandefa any amin'ny pejy ofisialy.
Raha manapa-kevitra ny hihaino onjam-peo ianao, Ny Photocall TV dia manome loharanom-pahalalana 120 eo ho eo isan-karazany, na miresaka politika, fanatanjahantena ary karazana hafa. Rojo toy ny Europa FM, Cope, Onda Cero, Cadena Ser, esRadio, Radiolé, Melodía FM ary misy 200 hafa azo tsindriana fotsiny.
Mety amin'ny karazana fitaovana rehetra
Amin'izao fotoana izao, misy ny serivisy Photocall TV amin'ny alàlan'ny tranonkalaTsy misy rindrambaiko ary azo ampiasaina amin'ny smartphone, takelaka, solosaina rehetra ary na dia amin'ny fahitalavitra Smart aza. Raha te hampiasa azy io dia mila mampiasa navigateur amin'ny tranga rehetra ianao, iray amin'ireo mifanaraka amin'ny pejy dia Google Chrome.
Toy ny ao amin'ny Chrome, dia mifanaraka amin'ny mpizaha tany fanta-daza hafa, ao anatin'izany ny Mozilla Firefox, Edge, Opera, raha miasa ao amin'ny Safari izy. Ny tranonkala dia mirona hampiditra haingana, mila manana hafainganana ianao fifandraisana haingana sy maharitra, atolotra anao hijery televiziona amin'ny kalitao avo lenta.
Mampiseho tonony mainty ity pejy ity, na dia manana ny dikan-teny fantatra amin'ny hoe Light aza miova ho alokaloka maivana kokoa izy io, fotsy manokana. Ny fahitalavitra Photocall na eo aza ny fahatsorany dia tsy isalasalana fa iray amin'ny feno indrindra, manana ny DTT Channels ho fifaninanana, na dia manome atiny rezionaly sy nasionaly aza izany.
Toy ny hoe tsy ampy izany, ny Photocall TV dia azo alefa amin'ny telefaona mankany amin'ny efijery, manome kalitao tena tsara amin'ny vahaolana avo kokoa. Ao amin'ny VPN dia misy ny safidy hanatanterahana an'io serivisy io amin'ny alàlan'ny VPN malazaAnisan'izany ny ExpressVPN, Cyberghost, NordVPN ary HolaVPN.
Kalitaon'ny fahitalavitra Photocall
Ny kalitaon'ny fantsona rehetra dia tena mendrika, dia hampiasa ny fifandraisana Internet, ampirisihina foana hampiasa fifandraisana WiFi ianao mba hialana amin'ny fandaniana megabytes amin'ny tambajotra finday. Mampiseho vahaolana lehibe ny fantsona rehetra, hiovaova arak'ilay mpampiasa izany raha te-hijery karazana fantsona rehetra izy.
Mampiseho ny fifandraisana amin'ireo adiresy ofisialy rehetra na eo aza ny fandefasana ny adiresy photocall.tv, manome ny mpampiasa ny zavatra tadiavin'izy ireo amin'izany fotoana marina izany. Vitsy ny fantsona mandeha amin'ny kalitao 4K, fa ny ankamaroany dia mamerina amin'ny kalitao manomboka amin'ny 720 ka hatramin'ny 1080p.
Solony hafa amin'ny fahitalavitra PhotoCall
Mitadiava safidy hafa amin'ny Photocall TV anio Saika tsy azo atao ny mahita ny lisitry ny fantsona lehibe, ny sehatra dia milalao mivantana ny fantsona amin'ny ankamaroan'ny tranga. Ny rindranasa sasany dia mampiasa rohy mivantana amin'ireo fantsona.
Iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ity serivisy ity ny TDT Channels, tsy hita ao amin'ny Play Store ny fampiharana, ny hany safidy dia ny mampidina azy amin'ny tranokala ofisialiny. DTT daholo ny fantsona, ankoatry ny fanampiana hafa izay tsy eo amin'ny lampihalan'ireo faritra samihafa.
Ankoatry ny DTT Channels, misy ny fampiharana ny fantsona samihafa, miankina amin'ny fahitana ny atiny rehetra amin'ny alalàn'izy ireo hatrany izany. Ho afaka hahita ny mivantana ianao, hahita programa fanoloana sy atiny manokana raha mandeha Premium miaraka amin'ny fisoratana anarana ianao.
Mitady pejy mitovitovy amin'izany, ny hany misy itovizany amin'ny Photocall TV dia Teledirecto, na dia mampiseho ny lisitry ny fantsona ambany aza. Mety tsara rehefa mifandray amin'ny fantsona tsirairay mivantana, mampiseho ny kalitao sy ny safidy samihafa.
Ny safidy tsara indrindra amin'ny fahitalavitra Photocall
Pluto TV, safidy mahaliana hafa
Iray amin'ireo sehatra nitombo rehefa nandeha ny fotoana dia ny Pluto TV, ny zavatra tsara indrindra momba azy dia ny miasa mivantana sy tsy misy ratra. Izy io dia serivisy misy fantsona marobe, ahafahanao mijery sarimihetsika, fanadihadiana, sarimihetsika ary fandaharana amin'ny fiteny Espaniôla.
Mampiseho anao ny zava-drehetra ny mpitari-dalana mba tsy ho diso anjara amin'ny atiny atolotra isan'andro ianao, ankoatry ny fananana atiny takiana, miaraka amin'ny fahafaha-mijery sarimihetsika isaky ny maniry. Pluto TV ho endri-javatra manan-danja Izy io dia manana fifanarahana amin'ireo orinasa lehibe toa ny MTV, ankoatry ny fananana fantsona mandefa andian-tantara angano.
Pluto TV dia manana sokajy tsirairay avy ka tsy manadino na inona na inona izahay, manome ny safidy mampiseho ny andian-tsarin'ny ankizy ho an'ny ankizy kely ao an-trano, ny fantsona mozika sy ny fanatanjahantena ary ny maro hafa. Safidy hafa io ary iray amin'ireo filokana izay raha manohy isika dia hampifandray antsika amin'ny fomba tsara.
Kodi, ivon-haino aman-jery misy safidy isan-karazany
Raha te-hilalao fantsona amin'ny alàlan'ny foibe multimedia ianao, ny safidy tsara indrindra dia ny mahazo Kodi, fampiharana malaza ahafahana mifandray amin'ny serivisy hafa. Kodi dia mamela anao hifandray amin'ny loharano, ao ohatra ny Pluto TV, Amazon Prime Video, Rakuten TV, ary loharano hafa, ao anatin'izany IPTV.
Ny zavatra tsara momba ny Kodi dia ny cross-platform, eo amin'ny rafitra fiasa rehetra, Android, iOS ary azo apetraka ho fampiharana ao amin'ny Smart TVs. Mety ho fampiharana alefa na aiza na aiza, satria ny Player matetika dia mihazakazaka sy mifandray amin'ny iray amin'ireo serivisy haingana.
Manampy endritsoratra dia manampy azy ho maro an'isa amin'ny maha-fampiharana azy Ny fahafantarana ny fomba hitantanana azy ireo dia hahatonga azy io ho iray amin'ireo feno indrindra sy miasa ao amin'ny Smart TV Box miaraka amin'ny rafitra Android. Ny lisitry ny fantsona dia tsy hisy farany, satria afaka mifandray amin'ireo fantsom-pahitalavitra malaza indrindra ianao.
Iray amin'ireo safidy marobe an'ny Kodi ny fahafahany milalao rakitra avy amina pendrive, na raki-peo sy horonan-tsary, ary koa ny tranomboky. Kodi Player dia ivon-haino aman-jery manan-danja ary iray amin'ireo tsy azonao adino raha te hahita atiny haingana ianao amin'ny fampifandraisana amin'ny mpizara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » TV Photocall: ny fomba hijerena fantsona maherin'ny 1.000 maimaim-poana miaraka amin'ny tsindry kely mihoatra ny iray
Ny fampiharana bevohoka tsara indrindra hifehy ny fizotrany rehetra